Owe-Dope Nation kuhlelo lukamabonakude i-Shift | Eyethu News
WHO cites Zimbabwe record as outrage grows over Mugabe honour - 35 mins ago
Spain to dismiss Catalonia’s government, call elections - 35 mins ago
Trump says he’ll allow release of Kennedy assassination files - 37 mins ago
Owe-Dope Nation kuhlelo lukamabonakude i-Shift
“Sekuyisikhathi sokuthi sivele nathi kade sayiqala lento.”
ULerato Nkaa ozoba sohlelwenni lukamabonakude iShift.
UMREPHA wesifazane waseSmero ongaphansi kwesitebele somculo i-Dope Nation uthi akakakholwa namanje ukuthi umenywe ohlelweni lukamabonakude iShift ukuba azodlulisa ulwazi lwakhe ngomculo kanye namafilimu.
UNkzn Lerato Nkala (23) uthi kuze kube imanje usazama ukukufaka emqondweni ukuthi uqokiwe ukuba avakashele lolu hlelo esiteshini esikhulu sikamabonakude u-SABC 1.
Lokhu kulandela ngemuva kokuba loluhlelo lwakhipha ukuthi izitebele ezenza umculo kanye namafilimu ukuba zithumele imisebenzi yazo ukuze zizothola ithuba lokuba ingxenye yalolu hlelo. Isitebele i-Dope Nation isona esibe nenhlanhla ngemuva kokuhambisa umsebenzi waso nababe sebethunyelelwa umyalezo ngesonto eledlule wokuthi bacela owesifazane ophuma kulesitebele ukuba azoba ingxenye yohlelo.
ULerato odume ngelika ‘exotic kiss’ emculweni, uthe ujabule kakhulu ngaleli thuba kanti uyakholwa ukuthi lizomvulela eminye iminyango emikhulu. “Namanje angikakholwa ukuthi ngimenyiwe lokhu kuzongivulela amathuba amaningi. Akuzuvulela mina kuphela kodwa nesitebele sethu uqobo.Ngiyathemba ukuthi loku kuzosakhela igama elihle,” kubeka yena.
Uqhube wathi kungokokuqala ukuba athole ithuba eliyingqayizivele njengaleli. “ Indlela engijabule ngayo angazi nokuthi ngithini akuchazeki. Ngiyathemba ukuthi loku kusayisiqalo ngoba sesiside isikhathi sayiqala lento. Sekuyisikhathi sokuthi sibonakale manje.”
ULerato waqala ukungena endimeni yomculo ngonyaka ka-2010 kanti ungowesifzane wokuqala osehlale isikhathi eside kangaka ngaphansi kwalesi sitebele. Uphinde waveza nokuthi ungumfundi e-Creative Arts College nalapho enza khona izifundo ze-Graphic Designer.
Ebuzwa ukuthi yini ayithanda kakhulu, uthe kuyena umculo uza kuqala kunako konke. “Umculo iwona ohamba phambili kodwa ngiyafunda ngenzela ukuthi makukhona into eyenzekalayo kumina ngingasakwazi ukucula kube khona enginako. Kodwa angiziboni ngipuma emculweni ngoba ngisho kuthiwa angisakwazi ukucula ngingafuna ukuthi kube khona engikwenzayo noma ukubhala amaculo,” kuphetha yena.
ULerato uhambe izolo (ngoLwesithathu) elibangise eGoli nalapho eyoshuthela khona lolu hlelo. Isiqephu sakhe sizosakazwa mhla zingama-26 Disemba ngo 11 ekuseni ku-SABC 1.
Kuboshwe 18 eKranskop ‘ngodlame’ emphakathini